तिहारमा कोरियाबाट दिदिलाई चिट्ठी :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
आज त टिकाको दिन है दिदी, यो अर्थपुर्ण दिनमा हामी सङ्गै हुनुपथ्यो तर बिडम्बना अवस्था अल्लि फरक रह्यो, हामिले अबस्थालाइ आफू अनुकल बनाउन सकिनौ । समय त किन दोहोरिएला र तर आउंदो समयलाइ हाम्रो पक्षमा पारौला नि हैँ । त्यो दिन पनि आउँछ दिदी,आउनु पर्छ ।
दिदिलाई मैले यो चिठ्ठिमा तपाइ भनेर सम्बोधन गरेको छु, तपाइलाई अचम्म लाग्ला ! पिर नगर्नु मैले हेला गरेर तेसो भन्या होईन । यो लोकले मेरो चेतना र म हुर्किएको संस्कारमा प्रश्न उठाउला कि भनेर हिम्मत गर्नु पर्‍यो तथापी हजुरको मन पक्कै दुख्छ । त्यस्तै ५,६ बर्ष अगाडी मैले तपाइलाई `तपाइ´ भनेको थिए, सारै चित्त दुखाउनु भाथ्यो, रुनु भयो पनो ! मेरो `तपाईं´ सब्दले भाइ टाढा भो कि भन्ने पर्यो । पछि मलाई नि गल्ति गरेछु भन्ने महासुश गराउनु भो । आखिर तपाइको मन नदुखोस पनि कसरी, मैले हजुरलाई बच्चै देखी `तं´ भनेर सम्बोधन गरे, गर्दै छु । तपाईंले तपाइमा भन्दा `तं´ मा बढी आफ्नोपन देख्नु, माया सम्झिनु भो जुन स्वभाबिक थियो, छ । तर यो कुरा बाहिर समाजले बुज्दैनन दिदि, बुज्दारहेनछन । दिदी भाइमा आदर सम्मान नहुनि होईन हुन्छ तर मैले दिदिलाई गर्ने सम्मान मेरो सम्बोधनले मापन गर्दैन । यो म र तपाइ मात्रै बुझ्छौ । भाइले पनि बुज्छ ।
हामिले फुजैदिदी र दिदिमा हुने भिन्नता छुट्ट्याउने मौका कहिल्लै पायनौ, अझ यसो भनु दिदिले त्यो मौका दिनुनै भएन ।
मलाई हिजो जस्तै लाग्छ, दिदिले पिठ्युमा बोकेर आफ्नै स्कुल लगेको । १ कलाश पढ्नु भन्दा पहिले नै ४,५ कलास पढेको अनुभब दिदिको कारणले नै मेरो स्मृतिमा सुरक्षित छ । दिदिका साथी सबै मेरा दिदी ! `बिजुलिको तार´ नाम गरेको गित गाएर पुरा क्लास नै रमाइलो गरिदिदा म सबैको प्यारो भाइ भएको थिए । अहिले पनि छु । तपाइको माया म ति सबै दिदिहरुमा बराबर देख्छु, हुँदाहुँदै ती कसैलाइ तं भनेर सम्बोधन गरिन किनकी ती तपाईं जस्तै ठ्यककै आफ्ना होइनन कि भन्ने लाग्यो, तं सम्बोधन भित्र माया र आदर देख्दैनन कि भन्ने लाग्यो र ती तपाइहरु भए तर तपाईं `तं´ !
भाइ प्रकाश !!
प्रकाशित मिति : २०७३ कार्तिक १६ (November 01, 2016)